धितोपत्र बोर्डमा भिष्मराज ढुंगानाको 'म्याच फिक्सिङ', यसकारण निश्चित थियो उनकाे नियुक्ति निगरानी -
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा भिष्मराज ढुंंगाना नियुक्त भएका छन् । सोमबार अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगानालाई बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । नियुक्तिसँगै धितोपत्र बजारको सर्वोच्च संस्थाको रुपमा रहेको नियमनकारी निकायलाई ५ बर्षसम्म हाँक्ने जिम्मेवारी ढुंगानाको हुनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षे सेवापछि कार्यकारी निर्देशकबाट गत असारमा मात्रै अनिवार्य अवकाश पाएका ढुंगानाले ६ महिना नपुग्दै अर्को नियमनकारी निकायमा नेतृत्व हात पार्न सफल भएका हुन् । त्यसो त यसअघि नै उनलाई बोर्डको विज्ञ सञ्चालकको रुपमा नियुक्त गरिएको थियो ।
ढुंगानाको म्याच फिक्सिङ
धितोपत्र बोर्डजस्तो आकर्षक पदमा नियुक्ति पाएका ढुंगानाको नियुक्ति भने त्यति चुनौतीपूर्ण भएन । किनकी बोर्डमा अध्यक्षका लागि सम्भावित उम्मेदवार भनिएका र राजनीतिक पहुँच पुर्याउनसक्ने उम्मेदवारहरुले अध्यक्षका लागि आवेदन नै दिएनन् । बोर्डमा यसअघि अध्यक्षका लागि नेपाल बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका वासुदेव अधिकारी, नेप्सेका पूर्व अध्यक्ष टंक पनेरु लगायतलाई दाबेदार मानिएको थियो । तर उनीहरुले त्यसमा आवेदन दिनुको सट्टा अधिकारी सो समयमा जर्मनी भ्रमणमा थिए भने पनेरु पनि उपत्यकाबाहिर गएको बताइन्छ ।
उनीहरुले आवेदन नदिए पनि अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छनौट समितिले खुलाएको आवेदनमा ढुंगानासहित ८ जनाले आवेदन दिएका थिए तर उनीबाहेक कोही पनि प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार थिएनन् । त्यसरी आवेदन दिनेहरुमा ढुंगानाका अतिरिक्त धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी, उप निर्देशक डा। नवराज अधिकारी, नेप्सेका पूर्व महाप्रबन्धक सिताराम थपलिया, कालिका सेक्युरिटिजका मालिक नरेन्द्र सिँजापति, निल सारु मगर, डा. केशव प्रसाद श्रेष्ठ र बलराम पाठक थिए ।
तर तीमध्ये डा. नवराज अधिकारी सत्तारुढ दलनिकट भएको भन्दै ढुंंगानाको प्रतिस्पर्धी मानिएको थियो । तर प्रतिस्पर्धी मानिएका अधिकारी सर्टलिष्टमै नपरेपछि ढुंगाना निश्चितजस्तै भएका हुन् । समितिको सिफारिसबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाएका ३ नाममा ढुंंगानाबाहेक निरज गिरी र केशवप्रसाद श्रेष्ठको नाम अटाएको थियो । तर ती दुवैजना सत्तारुढ दलमा पहुँच भएका व्यक्ति होइनन् । त्यसैले उनको नियुक्तिलाई म्याच फिक्सिङको रुपमा अथ्र्याउनेहरु पनि छन् । उनीहरुको दाबी छ कि ढुंगानाकै लागि अरु बलिया प्रतिस्पर्धीहरुले उम्मेदवारी नै नदिएका हुन् । त्यसो त ढुंगानाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर बन्ने इच्छा देखाएका थिए तर त्यो पदको दौड पेचिलो हुने देखेपछि अन्तिम समयमा उनले बोर्डमा उम्मेदवारी दिएको बताइन्छ ।
यद्यपि ढुंगानालाई धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको उपयुक्त उम्मेदवारका रुपमा यसअघिदेखि नै लिइँदै आएको थियो । नेपाली धितोपत्र बजारले पछिल्लो दशकमा ठूलो प्रगति हासिल गर्यो । रेवतबहादुर कार्की नेतृत्वमा यो क्षेत्रले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुलाई निरन्तरता दिँदै उनको कार्यकालमा अपुरो भएका कामहरुलाई पूरा गर्दै धितोपत्र बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धी बनाउन उनको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ ।
४ भदौ, काठमाडौ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा आजदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सबै गतिविधिमा निषेध गरिएको...